July 2020 - MinSayYar
31st July 2020 Editor
ရုရှားက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Covid-19 ကာကွယ်ဆေးကို သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ မှတ်ပုံတင်မယ်လို့ဆို=================================== မော်စကို၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်။ ရုရှားနိုင်ငံဟာ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးရှာဖွေမှုမှာ စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်း လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်ကနေ ၁၂ ရက်အတွင်း ဒီကာကွယ်ဆေးကို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Covid-19 ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားရင် ဒီဆေးဟာ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Covid-19 ရောဂါကူးစက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်မဲ့ ပထမဆုံး ကာကွယ်ဆေးအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီဆေးကို ထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ မော်စကိုက Gamaleya Institute နဲ့ ရုရှားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရံပုံငွေ (RDIF) တို့ ပူးပေါင်း သုတေသနပြုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ မှတ်ပုံတင်ပြီးစီးသွားမယ်ဆိုပါက သုံးရက်ကနေ ခုနှစ်ရက်အတွင်း […]
တစ်ပတ်( ၁)ကြိမ် (၃)ကြိမ်စားပြီးပါက ဆီးချိုရောဂါ အမြစ်ပြတ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်
တစ်ပတ်( ၁)ကြိမ် (၃)ကြိမ်စားပြီးပါက ဆီးချိုရောဂါ အခြေနေကို ပြန်လည်စမ်းသပ်ရန် (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းကြောင်း ဖတ်ရှုရသဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ( နက္ခတ်တ္ထရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း)ပါ ဆေးနည်း ဆေးနည်း…. ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား ရောချက်စားရုံသာ (၃)ကြိမ်မျှစားရုံဖြင့် ဆီးချိုလက်တွေ့သက်သာကြောင်းတွေ့ရှိ၍ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်ပြတ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ အထက်ပါ ဓာတ်စာစားနေချိန် ကာလအတွင်း၌ အချိုရည်မျိုးစုံများ အချိုဓာတ်ပါရှိသောအစားအသောက်များ . အထူးသဖြင့် သရက်သီးမှည့် ပိန္နဲသီး ဒူးရင်းရှောက်ချိုသီး လိမ္မော်သီး ကျွဲကောသီး ကြက်မောက်သီးနှင့် ကောက်ညှင်းများကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ နက္ခတ်တ္ထရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၃၆၉( ဧပြီလ ၂၀၁၇)မှ ပြန်လည်ကူးယူတင်ပြပါသည် ။ Credit MyMc ============================ Zawgyi တစ်ပတ်( ၁)ကြိမ် (၃)ကြိမ်စားပြီးပါက ဆီးချိုရောဂါ […]
မြန်မာနိုင်ငံက သဘာဝအတိုင်း ခါးအသေးဆုံးပိုင်ရှင် ဆုလှိုင်ကို အင်္ဂလန်မီဒီယာတွေမှာ အထူးအဆန်းဖော်ပြနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။မြန်မာက ဆုလှိုင်ရဲ့ ခါးဆိုက်ဒ်ဟာ ၁၃.၇ လက်မသာရှိလို့ ကမ္ဘာ့ခါးအသေးဆုံးစာရင်းဝင်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဆုလှိုင်ဟာ သူမရဲ့ သေးငယ်လှတဲ့ ခါးကို လူမှုကွန်ယက် Instagram ပေါ်တင်ရင်းကနေ အနောက်နိုင်ငံတွေက သတိထားမိတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ခါးဟာ Photoshop နဲ့လုပ်ထားခြင်းမရှိသလို သဘာဝအတိုင်းရတဲ့ ခါးအရွယ်အစားဖြစ်တယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ်။ အင်္ဂလန်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ ကျန်းမာတဲ့ခါးဆိုက်ဒ်အရွယ်အစားကို ၃၁.၅ ထက်မကျော်ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်အရွယ်အစားပါ။ အစားအသောက်တွေတော့ ဆင်ခြင်တာတွေရှိပါတယ်။ ထူးခြားတယ်လို့မခံစားရပါဘူး”လို့ ဆုလှိုင်က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့အသေးဆုံးခါးဆိုက်ဒ်ပိုင်ရှင်က ဗြိတိန်သူဂရန်ဂျာဖြစ်ပြီး ခါးဆိုက်ဒ် ၁၃ လက်မသာရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ခါးဆိုက်ဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေရှိနေပေမယ့် အကောင်းမြင်တဲ့သူများပါတယ်။ Ref – DailyMail […]
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်မိုးမိုးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့အဆိုတော်လောကမှာတေးစီးအယ်ဘမ်များစွာကိုထွက်ရှိထားနိုင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ မိုးမိုးကတော့သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကို သားတစ်ယောက်၊သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမိုးဟာအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် လက်ရှိမှာတော့သူကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ “ဒီမှာဟော့ပေါ့”ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းလေးကရရှိလာတဲ့ငွေလေးတွေကိုတော့စုထားပြီး ဒီနေ့မှာသစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့” ယနေ့ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ဒီမှာဟော့ပေါ့လုပ်ငန်းရဲ့ကုသိုလ်”ဆိုပြီး မိုးမိုးကအလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ဟော့ပေါ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးမိုးတို့မိသားစုရဲ့အလှူအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။ Source:Moe Sithu Kyaw Zawgyi ဟော့ပေါ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့မိုးမိုးတို့မိသားစု ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်မိုးမိုးကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့အဆိုတော်လောကမှာတေးစီးအယ်ဘမ်များစွာကိုထွက်ရှိထားနိုင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ မိုးမိုးကတော့သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကို သားတစ်ယောက်၊သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမိုးဟာအနုပညာအလုပ်တွေအပြင် လက်ရှိမှာတော့သူကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ “ဒီမှာဟော့ပေါ့”ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းလေးကရရှိလာတဲ့ငွေလေးတွေကိုတော့စုထားပြီး ဒီနေ့မှာသစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့” ယနေ့ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ဒီမှာဟော့ပေါ့လုပ်ငန်းရဲ့ကုသိုလ်”ဆိုပြီး မိုးမိုးကအလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရေဟော့ပေါ့ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေလေးနဲ့ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မိုးမိုးတို့မိသားစုရဲ့အလှူအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။
တစ်ကယ်လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးပါ ကူညီပေးကြပါအုံး
ဒါမျိူးဆိုရင် share မလုပ်ကျဘူး Share ပေးပါ ဗျ Share လေးတစ်ချက် နဲ့စာသင်ကျောင်းလေးပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဗျ တည်နေရာ-တနသာၤရီတိုင်း၊ကျွန်းစုမြိုနယ်၊ဝန်တောင်ကျေးရွာ၊မူလွန် ကျောင်းက မိုးရွာတယ့်နေ့ ၊ရေကြီးတယ့်နေ့ ဘယ်လိုမှစာသင် လို့မရပါဘူး။ တခြားနေရာတွေမှာလည်းလှူ ပါ၊မလှူနဲ့ လ့ိုမပြောပါဘူး၊ အဓိကလိုအပ်တယ့် နေရာတွေမှာလည်း လှူဒါန်းကြပါ ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားပြီး ်နိုင်သလောက်လေးလှူဒါန်း နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. …. #N #Myeik Fb Acc,,စေတနာ လေးစားစွာcrd ပေးပါတယ်ဗျာ သဒ္ဒါ အားနည်းများမဆိုပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ဗျာ ဒီနှစ်မှ တာဝန်ကျတယ့် ကျောင်းအုပ်တာဝန်ခံ ဆရာကိုလင်းကြူ 09253326918တာဝန်ကဆရာတွေ တတ်နိုင်သလောက်လေး ပြုပြင် ပြီး စာသင် ကြား နေပါတယ် ဗျာ ကျနော် သူငယ်ချင်း ကျောင်းအုပ်တာဝန်ခံပါ ဒီနှစ်မှတာဝန်ကျတယ့်ကျောင်းလေးပါ ခင်ဗျား.. […]
ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောလူနာအတွက် သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူအလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘုန်းရှိန်ခန့်
ဘုန်းရှိန်ခန့်ကတော့MRTV -4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို စတင်ရရှိခဲ့တဲ့မင်သားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့”ချစ်ရပါသောနွေ၊စိတ်၏ခြေရာ၊ပျားရည်အိုင်၊ ပုဂံမြို့သူ၊နွေလယ်ညရဲ့လမင်း”စတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်းဘုန်းရှိန်ခန့်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့သူကကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောကိုဖြိုးမြတ်ထိုက်အတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူအလှူငွေများလှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့”ကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောကိုဖြိုးမြတ်ထိုက်အတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ,PSK_Vitamins အဖွဲ့မှအလှူငွေများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ PSK_Vitamins မှလည်းလစဉ်ကျန်းမာရေးစရိတ်တက်နိုင်သလောက် မပျက်မကွက်ပေးအပ်မည်ဟုလည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျ၇ ရက်သားသမီးများအားလုံးအမျှပေးဝေပါ၏အားလုံးလည်းကျန်းမာကြပါစေ#ပီတိလေးဖြစ်လို့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။”ဆိုပြီး ဘုန်းရှိန်ခန့်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြထေားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Source:PhomeShein Khant Zawgyi ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောလူနာအတွက် သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူအလှူငွေများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဘုန်းရှိန်ခန့် ဘုန်းရှိန်ခန့်ကတော့MRTV -4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့တဲ့မင်သားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့”ချစ်ရပါသောနွေ၊စိတ်၏ခြေရာ၊ ပျားရည်အိုင်၊ပုဂံမြို့သူ၊ နွေလယ်ညရဲ့လမင်း”စတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအခိုင်အာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်းဘုန်းရှိန်ခန့်ဟာအနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး သူ့ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့သူကကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောကိုဖြိုးမြတ်ထိုက်အတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူအလှူငွေများလှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကိုတော့”ကျောက်ကပ်ဆေးရန်အတွက် ဆေးကုသရန်အခက်ခဲဖြစ်နေသောကိုဖြိုးမြတ်ထိုက်အတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ,PSK_Vitamins အဖွဲ့မှအလှူငွေများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ PSK_Vitamins မှလည်းလစဉ်ကျန်းမာရေးစရိတ်တက်နိုင်သလောက် မပျက်မကွက်ပေးအပ်မည်ဟုလည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျ၇ ရက်သားသမီးများအားလုံးအမျှပေးဝေပါ၏အားလုံးလည်းကျန်းမာကြပါစေ#ပီတိလေးဖြစ်လို့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။”ဆိုပြီး ဘုန်းရှိန်ခန့်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအလှူပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူဖော်ပြထေားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာပြည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားမှု ဩဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ ထပ်တိုး
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မယ့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအတွက် ပြည်ဝင်ခွင့် ယာယီ ကန့်သတ်ထားတဲ့ အစီအမံတွေ အားလုံးကို ဩဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ ထပ်ပြီး တိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ပြည်ပကနေ ဝင်ရောက်လာနိုင်တာနဲ့ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကနေ မြန်မာပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ အစီအမံတွေကိုဆက်လက်ချမှတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရှေးရှုပြီး တိုးမြှင့်လိုက်တာလို့ ဇူလိုင် ၃၀ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ အရေးပေါ် အစိုးရတာဝန်နဲ့ဖြစ်စေ၊ မလွှဲမရှောင်သာတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပနိုင်ငံသား သံတမန်တွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပျံသန်းပြေးဆွဲမယ့် ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်တွေ၊ အထူးလေယာဉ်တွေနဲ့ လာရောက်ဖို့ရှိရင် ဗီဇာအကန့်အသတ်တွေကနေ ကင်းလွတ်ခွင့်ရဖို့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက မြန်မာသံရုံးတွေကို အကူအညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးကနေ […]
သစ်တံခါးဆရာတော်ကြီးအားနေ့ဆွမ်း ဆပ်ကပ်ခြင်း၊ ဝါဆိုသင်္ကန်း နှင့် နဝကမ္မအလှူငွေများကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည် ကတော့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ပါဝင်သရုပ်ထားပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သဘာဝကျကျ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်သင်းကြည် က လတ်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် နဲ့သာလုပ်ကိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိလည်း ခိုင်သင်းကြည် က ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် ငယ်ရွယ်နုပျိုနေပြီး လှပချောမောနေတုန်းပါ။ ယခုမှာဆိုရင်လည်း ခိုင်သင်းကြည် က ပရိသတ်တွေ ကြည်နူးပီတိဖြစ်စေမယ့် အလှူပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ သူမ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူလေးကတော့ သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားအား အသိမိတ်ဆွေ အိမ်လေးမှာ သွားရောက်ပြီး နေ့ဆွမ်း ဆပ်ကပ်ခြင်း ၊ ဝါဆိုသင်္ကန်း များ နှင့် နဝကမ္မအလှူငွေ များကို လှူဒါန်းခဲ့ကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးကို ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်အောင် ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်း ဥမင်လှုိဏ်ခေါင်း
သဘာ၀ မထိခိုက်အောင် ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်း ဥမင် (Uni) ဒီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကတော့ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီး Xueshan နှင်းတောင် ဥမင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် အမှတ် ၅လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီး Taipei နဲ့ Yilan ကို ဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။ တောင်ကိုဖြတ်ကာ ဖောက်လုပ်ထားပေမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ချိန် ၁၅နှစ် ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဥမင်တည်ဆောက်ရေးဟာ အလွန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၂၅ယောက်အထိ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဥမင်ဖောက်လုပ်ရေးမှာ ကွန်ကရစ် ၃၇၀,၀၀၀ ကုဗမီတာ ၊ ကေဘယ်ကြိုးအရှည်စုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ကီလိုမီတာ နဲ့ လျှပ်စစ်မီးသီး အလုံး ၂၀၀၀ကျော်ကို သုံးစွဲတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၈၃ဘီလျံခန့် ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ အသွားအပြန် လေလမ်းသွားလမ်းမကြီးတွေဖြစ်ကာ အရှည်ကတော့ […]
နိုင်ငံခြားရောက်တုန်း ဝါသနာပါရာ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ နိုင်နိုင်း
တစ်ခေတ်တစ်ခါကနေ ယနေ့အချိန် ဆယ်စုနှစ်ကျော် အောင်မြင်မှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မင်းသားချော နိုင်နိုင်းကတော့ ဇနီးချောလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့အတူ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ နိုင်နိုင်းဟာ ကိုဗစ်ကြောင့် အနုပညာအလုပ်နေတွေရပ်နားထားရတာကြောင့် မိသားစုကိုအချိန်ပေးဖို့ ရဲဘော်လေးတွေရှိရာ နိုင်ငံခြားကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ မင်းသားချော နိုင်နိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သေနတ်ပစ်ကွင်းမရှိတာကြောင့် နိုင်ငံခြားရောက် သေနတ်ပစ်ကွင်းသွားကာ ဝါသနာပါရာ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင်နေပါတယ်။ သူကတော့ သေနတ်ပစ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ အမှတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ “လူဆိုတာ ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးကို လုပ်ခွင့်ရတာ ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပါ။ ချစ်သော ပရိသတ်များလည်း ကံကောင်းခြင်းများ ရရှိကြပါစေ….” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြောျမငျးသားခြော နိုငျနိုငျးကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ သနေတျပဈကှငျးမရှိတာကွောင့ျ နိုငျငံခွားရောကျ သနေတျပဈကှငျးသှားကာ ဝါသနာပါရာ သနေတျပဈလေ့ကငြျနပေါတယျတဲ့။ပရိသတျာကီးအတှကျ နိုငျးနိုငျးရဲ့ […]